Qiyaasta roobka: astaamaha, noocyada iyo sida ay u shaqeeyaan | Saadaasha Shabakadda
Waxaa ka mid ah aaladaha saadaasha hawada ee loogu isticmaalka badan yahay adduunka oo dhan iyadoo leh muhiimadda ugu badan pluviometer. Ereygu wuxuu ka yimid pluvio oo macnaheedu yahay roob iyo mitir oo loola jeedo cabirkiisa. Sidaa darteed, qiyaasta roobku waa aalad lagu cabbiro roobka. Qiyaasta roobka waxaa lagu daray xarumaha cimilada waana cunsur bixisa macluumaad weyn si loo ogaado labadaba saadaasha hawada iyo cimilada deegaanka. Wax kasta oo roob da'aa waxaa lagu soo ururiyaa qalabkan.
Halkan waxaad ka ogaan kartaa sida qiyaasta roobku u shaqeeyo iyo muhiimadda ay u leedahay saadaasha hawada iyo cimilada.
1 Waa maxay qiyaasta roobka
3 Sida ay u shaqeyso
4 Noocyada qiyaasta roobka
4.4 Laba jibaar baaldi
Waa maxay qiyaasta roobka
Kani waa aalad loo isticmaalo awood u lahaanshaha cabirka roobka ku dhaca aag waqti cayiman. Xogtan roobka ayaa la diiwaangelinayaa illaa heer loo isticmaali karo in lagu diyaariyo xaashida xogta cimilada ee aagga. Iyadoo la ururiyey dhammaan xogta la uruuriyey, celceliska celceliska roobka waxaa la sameeyaa bilo, sannadba sannadka ka dambeeya, si loo arko sida roobabku isu beddelaan markii loo eego.
Tusaale ahaan, haddii aaggu leeyahay celcelis ahaan roobab sanadle ah oo qiyaastii ah 500 mm, tan waa la yaqaan sababta oo ah xogta roobka ayaa la diiwaan geliyey sannado badan. Qiyaasaha ugu horeeya waxay soo jireen ilaa 1800. Qiyaasta roobka waxay aruurin kartaa xogta nooc kasta oo roob ah sida Lluvia, baraf, baraf, qabow ama qulqulaya. The ceeryaamo ama dharabku ma cabiri karo maadaama ay tahay kaliya isu-biyoodka biyaha.
Adeegga ugu weyn waa awood cabbiraan roobabka saadaasha hawada ee aag si loo helo xog kala duwan.
In kasta oo ay u muuqato xoogaa casri ah, cabbiraadda roobka Waxaa la duubay ilaa 500 BC. Giriiggu waxay ahaayeen kuwii ugu horeeyey ee cabira roobka. Markii dambe, Hindiya, waxay horey u lahaayeen uruurinta roobab dhab ah. Waxay dhigeen konteynarro iyo konteenarro si ay awood ugu yeeshaan inay qabtaan biyaha roobka oo ay u awoodaan inay cabbiraan. Xaaladahaas oo kale, cabbirka roobka looma samaynin ujeeddada abuurista diiwaanno iyo xog ku saabsan horumarinta cimilada aag. Kaliya waxay gacan ka geysatay hagaajinta waxsoosaarka dalagga.
Sannad kasta roobka ayaa la cabiraa si loo ogaado biyaha u diyaarsan dalagyada. Baahida loo qabo in la cabiro roobka ayaa ka dhasha baahida beeraha. Tan waxaa xaqiijinaya qoraalada diimeed ee laga helay Falastiin oo ka hadlay sida dayrta roobku u saamaysay bixinta biyaha lagama maarmaanka u ah waraabka dalagyada. Sidaa darteed, wakhtigaas sahayda iyo beeraha labaduba waxay ahaayeen waxyaalaha kaliya ee muhiimka ahaa. Uma ay baahnayn xogtaas saadaasha hawada ama saadaasha hawada.
In badan kadib 1441-kii Kuuriya, qiyaasta roobka ugu horreeyay ee ka samaysan naxaas iyo furitaan caadi ah ayaa la sameeyay. Qiyaasta roobkan waxay shaqeynayeen ku dhowaad 200 oo sano, markii 1639, Benedetto Castelli, oo xer ka ahaa Galileo Galilei, ayaa lagu guuleystay in la sameeyo cabbiraadihii ugu horreeyay ee roobka ee Yurub. Qalabkan ayaa gacanta lagu dhigay oo lagu calaamadeeyay heerka roobab ee saacado jiray.
Sanadkii 1662-kii ayaa la soo saaray qiyaasta ugu horreysa ee roobka oo baaldiyo ku janjeera. Qalabkan waxaa loo adeegsaday in lagu duubo oo keliya xogta roobka laakiin sidoo kale xogta saadaasha hawada sida heerkulka hawada iyo jihada dabaysha.
Qalabka waa in la dhigaa meel sare si uu u qori karo heerarka roobka. Sidan oo kale, ma saameyn doonto nooc kasta oo carqalad ah. Waqtiga cabirka, weelka wuxuu bilaabayaa inuu keydiyo biyaha roobka si tartiib tartiib ah markuu dhameeyo, Waxay kuxirantahay cabirka aad calaamadeyso, wuxuu noqon doonaa roobka aagga.
Waxay awood u leedahay inay cabirto roobka, roobdhagaxyaalaha, barafka, qulqulaya, iyo barafka, inkasta oo aysan cabbiraynin ceeryaamo ama sayax. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah inay tahay arrin uumiga dhibcaha biyaha oo aan lagu cabiri karin calaamadaha muraayadda. Waa qaab dhululubo ah waxayna leedahay qayb u eg maslaxad si ay u ururiso biyo badan.
Noocyada qiyaasta roobka
Ubaxa 55062 ...
Waa nooca ugu caansan. Waa tilmaame si fudud oo toosan u tilmaamaya xaddiga roobka ka da'aya aag. Waxay ka kooban tahay weel silsilad leh oo miisaankiisu dhammaystiran yahay. Dhererka biyaha ay gaarayaan waxay u dhigmaan heerarka roobka. Waxaa lagu cabiraa milimitir.
Nooca cabirka roobka ayaa ah midka ugu saxsan. Iyaga ayaa mas'uul ka ah ururinta biyaha ku dhaca masaf. Maskaani wuxuu dib ugu celiyaa biyaha weel la qalanjabiyay. Waxay u muuqdaan in la dhigayo dherer cayiman oo dhulka ah iyo dhicitaanka biyaha ayaa la diiwaangeliyaa 12 saacadood kasta. Khaladka kaliya ee kujira astaamahan roobka ayaa ah in aan la cayimin karin waqtiga uu roobku da’ayay.
Iyada oo nooca cabirka roobka waqtiga roobabku waa la ogaan karaa si sax ah. Waxay ka kooban tahay durbaan wareeg ah oo xawaare joogto ah ku wareegaya. Waxaa lagu qalin jabiyaa qalin gudaha dhexdeeda si qumman u sabbaynaya. Haddii kale, qalinku wuxuu calaamadeeyaa xariijin jiifa.
Laba jibaar baaldi
Qalabkani wuxuu biyaha ka soo ururiyaa iyada oo loo marayo masaf waxayna u horseedaysaa baaldi yar yar oo saddex-geesle ah oo laga samayn karo bir iyo caag labadaba. Waxay leedahay fiiq bartanka dheelitirka. Marka ay gaarto roobab la filayo, oo inta badan ah 0,2 mm, isbeddelada isu dheelitirnaanta waxay ku dhacdaa baaldiga kale, halka baaldiga ugu horreeya mar kale la tiriyo.
Muhiimadda cabirka roobka ayaa soo jirtay tan iyo Giriiggii hore. In kasta oo markii hore ay waxtar u lahayd oo keliya horumarinta beeraha, haddana waxaa muhiim ahayd in la damaanad qaado habnololeedka cuntada ee dadka. Sanadihii la soo dhaafay, muhiimaddiisu waxay u kacday si aan ugu adeegi karin oo keliya dalagyada, laakiin sidoo kale in lagu cabbiro roobka si loo barto cimilada adduunka oo dhan loona ogaado isbeddelka cimilada.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto qiyaasta roobka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Qalabka Saadaasha hawada » Pluviometer
Wey no mames waan jeclaa wax walbana way ii adeegaysay hawshaydii
Dhulka aasaasiga ah